आईपीओ ल्याउने तयारीमा रहेको प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सको नाफा २.५ गुणा वृद्धि
मंसिर ३, काठमाडौं । प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले चालू आवको पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजानिक .गरेको छ ।
वित्तीय विवरण अनुसार गत आवको पहिलो त्रैमासको तुलनामा चालू आवको पहिलो त्रैमासमा कम्पनीको नाफा २ दशमलव ५ गुणा वृद्धि भएको हो । कम्पनीले गत आवको पहिलो त्रैमासमा रू. १ करोड २२ लाख मुनाफा आर्जन गरेकोमा चालू आवको सोही अवधिमा वृद्धि भएर रू.३ करोड ९ लाखभन्दा बढी नाफा कमाएको छ ।
चालू आवको पहिलो त्रैमासमा कम्पनीको आम्दानीमा वृद्धि भएकाले नाफा बढेको हो । गत आवको पहिलो त्रैमासमा कम्पनीले रू. ३ करोड २९ लाख ८२ हजार आम्दानी गरेकोमा चालू आवको सोही अवधिमा वृद्धि भएर रू. ४ करोड १३ लाख ११ हजार पुगेको छ ।
उक्त कम्पनीले ६० लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्नको लागि नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको छ । बोर्डबाट स्वीकृती पाएपछि कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्नेछ । विक्री प्रबन्धकमा सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।
हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. १ अर्ब ४० करोड रहेको छ । आईपीओ निष्कासन गरी बाँडफाँट गरेपछि पूँजी रू. २ अर्ब पुग्नेछ । चालू आवको पहिलो त्रैमाससम्ममा कम्पनीले जगेडा कोषमा रू. २३ करोड ९१ लाख, जीवन बीमा कोषमा रू. १ अर्ब १९ करोड ४९ लाखभन्दा बढी सञ्चित गरेको छ ।
सो अवधिमा कम्पनीले रू. २५ करोड ९७ लाखभन्दा बढी बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । गत आवको तुलनामा बीमाशुल्क ९५ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । चालू आवको पहिलो त्रैमासमा कम्पनीले ५८ जनालाई रू. ६१ लाख ६८ हजार दाबी भुक्तानी गरेको छ भने २ जनालाई रू.४१ लाख दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ ।
दोहोरो अंकले बढेको बजारमा विशाल बजार कम्पनीको शेयरमूल्यमा उच्च गिरावट[२०७७ मंसिर, १५]
२००० विन्दुमाथि पुगेर फर्कियो बजार, करीब ९ अर्बको कारोबार [२०७७ मंसिर, १५]
बजारले कीर्तिमानी उचाई कायम गरिरहँदा धितोपत्र बोर्डले भन्यो : शेयर बजारमा सजगतापूर्वक लगानी गरौं
४ लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्ने तयारीमा रहेको महिला लघुवित्तको वित्तीय अवस्था